Ezinye Izingobo zomlando - Thumela RELAY
UJoe Biden Chose Kamala Harris njengo-VP - New York Times
Amandla engxabano engaba khona phakathi kwabeluleki bakwaBiden noHarris axazululeke ngenye indlela, okungenani okwamanje: UMnu. UBenzen nabeluleki bakhe badlulisela kuNkz Harris ukuthi balindele ukuthi babe nokuqonda okufanayo mayelana nokuqashwa kwabasebenzi…
UPompeo Umemezela uShift eSite Stance Kwezokuhlaliswa Kwa-Israyeli - New York Times
ividiyo entsha elayishiwe: U-Pompeo Umemezela uShift e-US Stance on Israeli SettlementstranscriptBacktranscriptPompeo Umemezela uShift e-US Stance on Israeli SettlementsSecretary of State Mike Pompeo uthe United States ngeke icubungule...
I-COVID-19: Abesifazane abakhulelwe kufanele baqhubeke nokuvakasha ngaphambi kokubeletha
Ukuhambela kwabakhulelwe ezibhedlela kwehle kakhulu ngenxa yokwethuka kwe-COVID-19, kodwa ochwepheshe bezempilo bacela abesifazane abakhulelwe ukuthi baqhubeke nokuhambela ezibhedlela, ngaphandle kokwesaba. Ekhuluma esithangamini sabezindaba sansuku zonke ku-COVID-19, uDkt.
Ibhola: U-Youssoufa Moukoko oneminyaka engu-15 waseCameroano, inkanyezi ebabazekayo neBorussia Dortmund
NgoNovemba, uYoussoufa Moukoko uneminyaka engu-16, kanti kulesi sikhathi umgadli usethole udumo olukhazimulayo emhlabeni webhola njengezinhloso ezinhle kakhulu zokuzingela kanye nensizwa yakwaBorussia Dortmund. Umuzwa oneminyaka engu-15 ubudala, uYoussoufa Moukoko u…
I-PAK ijoyina iMinader kuphrojekthi yayo yokuqinisekisa ukuphepha kokudla eKribi
UMnyango wezoLimo nokuThuthukiswa kwezindawo zasemakhaya (iMinader) kanye nePortonomous Port yaseKribi (PAK) basanda kusayina isivumelwano sokuthi kuthuthukiswe iphrojekthi yeGreen Belt ezungeze iKribi. Lo msebenzi uqukethe ukusebenzisa ...
UCarne Asada Lorenza Recipe - Ukupheka kwe-NYT - New York Times
TELES RELAY Agasti 12, 2020 0
Sekungamakhulu eminyaka, amaSonoran carne asada tacos ngokwesiko abebuthana kuma-breakillas efulawa. Kodwa-ke, i-corn breakilla
Cha, ividiyo ekhombisa indlovu ijaha izinja nabantu ehlathini ayizange ...
Kusukela ngoJulayi 22, 2020, ividiyo ekhombisa indlovu ethukuthele ngokujaha abantu abasha nezinja zabo bezilokhu zizungeza ezinkundleni zokuxhumana. Lesi sehlakalo ngokusho kwabanye abasebenzisi be-Intanethi sadutshulwa eCameroon. Sihlolile…
I-COVID-19: Amahlebezi anyaza izingane ezingama-80,000 zokugoma
ZIZOQOLA izingane ezingama-80,000 ezingakagonywa kulo nyaka ngenxa yezindaba ezingemanga namahlebezi ahlobene ne-COVID-19, kusho izikhulu zikahulumeni Wezempilo. Lezi zibalo zidalulwe ngesikhathi kuqhubeka isithangami nabezindaba nsuku zonke kwi-COVID-19, eCameroon…
I-UN: "Ukuzivocavoca izikhali" kubulala abangama-70 eSouth Sudan
I-UN ithe lolu dlame lubangelwe yingxenye yezokuphepha ezweni. Bangu-70 abantu ababulewe kwathi inqwaba yalimala ezimpini zangempelasonto phakathi…
Ukubuyekezwa Okubukhoma kweCoronavirus: Amacala Womhlaba Wonke Afinyelela izigidi ezingama-20 - New York Times
TELES RELAY Agasti 11, 2020 0
Umuthi wokugoma waseRussia usebenza 'ngokwanele,' kusho uMongameli Putin. Kepha akukaze kuphothule izivivinyo zeSigaba III. Umlawuli wezokunakekelwa kwezempilo waseRussia uye waba ngowokuqala emhlabeni ukuthi avume ukugoma i-coronavirus, uMongameli Vladimir V.…
1 2 3 ... 133 olandelayo